Mz က အစ်ကိုတို့ရေကူညီပြီးဖြေပေးကြဦးဗျာ. - MYSTERY ZILLION
Mz က အစ်ကိုတို့ရေကူညီပြီးဖြေပေးကြဦးဗျာ.
CCTV camera or IP Camera ဘယ်လိုသုံးရလဲ.. ရန်ကုန်ဘယ်နားမှာရနိုင်လဲဲသိချင်လို့ပါ...
အင်းစိန် တံတား အဆင့်းနားမှာ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ တရုတ်ကြီးကတော့ အဲဒါတွေ ဆင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့ကို တချက်မေးကြည့်ပေးမယ်။ အခုတော့ ခရီးထွက်သွားတယ်။ သူကတော့ တရုတ် ယိုးဒယားတို့ကနေ သွားဝယ်တာပါ။
Myanmar Security CCTV Services Team. Low price, Best quality, Safe security
Mr. Htoo Char Aung
Phone: 0950 74 349
ကိုအင်းလေးသား ရေ ...
အထက်က site လေးကို ၀င်ကြည့်ပြီး သူတို့ နဲ့ ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ။
Myanmar Yellow Pages ရဲ့ Security Control Eqpt. & Systems category အောက်မှာလည်း company တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုတို့ရေ..ကျွန်တော်ဆက်စုံစမ်းလိုက်ဦးမယ်.. ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်...
ဟုတ်ကဲ့ ကိုစေတန်.. ကျေးဇူးပဲဗျ..
We import CCTV and IP cameras (Samsung, Axis, Sony, and others )from singapore. Warranty is one year for parts. We can compete price and quality. We have oversea cctv experience also. If you interest, just drop email [email protected] or plz call 09 5104773( Pho Thar Hla One Stop CCTV Solution Provider).......